Darpan Nepal – हरेकले जान्नैपर्ने स्वस्थ्य र निरोगी बन्ने सूत्रहरु
हरेकले जान्नैपर्ने स्वस्थ्य र निरोगी बन्ने सूत्रहरु
हामी सबै चाहन्छौ, स्वस्थ्य जीवन व्यतित गर्न पाइयोस् । स्वस्थ्य कसरी रहने ? के गर्दा निरोगी भइन्छ ? कसरी तन्दुरुस्त र जवान भइन्छ ?
स्वास्थ रहनका लागि सबैभन्दा पहिला त अनुशासित दिनचर्या आवश्यक हुन्छ । यस्तो दिनचर्या, जहाँ स्वास्थ्यलाई प्रतिकुल हुने कुनै कुरा नहोस् ।
अनुशासन, थोरै प्रयास र केहि सावधानी । यी कुराले हामीलाई सधै निरोगी राख्छ । यद्यपी हामी स्वास्थ्यसँग धेरै खेलबाड गर्छौं । मनलाग्दो जीवनशैली अपनाउँछौ । त्यसैले हामीलाई रोगी बनाउँछ ।
रोग लागेपछि हामी मानसिक र शारीरिक रुपले गल्दै जान्छौ । थाक्दै जान्छौ । कमजोर हुन्छौ । जाँगर हराउँछ । उर्जा हराउँछ । अन्ततः आफ्नो शरीर आफैलाई बोझिलो हुन थाल्छ । आफुलाई मात्र होइन, परिवारलाई पनि बोझिलो हुन थाल्छ । त्यही कारण स्वस्थ्य जीवनका लागि अनुशासित दिनचर्याको पालना गर्नुपर्छ ।
– समयमा सुत्ने । प्रात काल अर्थात बिहान उठेर टहल्ने । व्यायाम गर्ने । दिनभर कुर्सीमा बसेर काम गर्ने व्यक्तिले बिहान शारीरिक श्रम गर्नैपर्छ । वा व्यायाम गर्नैपर्छ ।
– आफ्नो पाचन तन्त्रलाई स्वस्थ्य राखेर निरोगी हुन सकिन्छ । यसका लागि सही समयमा पौष्टिक आहार लिनुपर्छ ।
– खाना खानु २० मिनेट अघि पानी पिउने । खाना खाएको समयमा पानी नपिउने । खाना खएको आधा घण्टा पछि मात्र पानी पिउने ।
– बाहिरी गर्मीबाट आउनसाथ चिसो पानी नपिउने । कुलर वा एसीको हावामा नबस्ने । ओझेलमा बसेर धेरै समय हावा नलिने ।
– एकग्रता बढाउन र मनलाई शान्त राख्नका लागि ध्यान एवं योगको सहारा लिने । मनलाई शान्त गर्ने ।
– सुत्नुअघि मनलाई शान्त राख्ने । यसका लागि ध्यान वा योग गर्न सकिन्छ । दिनभरको कुरालाई भुलेर सुत्ने अभ्यास गरौं । सुत्नुअघि कतिलाई पुस्तक पढ्दा निन्द्रा लाग्छ ।
– नियमित स्वास्थ्य जाँच गरौं । खासगरी चालिस बर्षपछि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ । चिकित्सको परामर्श लिनुपर्छ । औषधी नियमित रुपले सेवन गरौ । मनोरञ्जन गरौं । खुसी रहने प्रयास गरौं ।
– नियमित रुपमा व्यायाम गरौ । यसका लागि आधा घण्टाको तालिका तयार गरौ । योग मुद्रा बदल्दै योग गरौं । कहिले टहल्न र कहिले साइक्लिङमा जाने । कार्यलयमा लिफ्टको ठाउँमा सिंढी प्रयोग गरौ । एकै स्थानमा लामो समय नबसौ । आधा घण्टा बसेपछि यताउता हिँड्ने, जिउ तन्काउने गरौं ।
– जंक फूड, कोल्ड डि्रंक र बनावटी चिनीजन्य खानेकुरा सेवन नगरौं । तारेको, भुटेको, मसलेदार खानेकुरा धेरै सेवन नगरौ । यस्तो खानेकुराले पाचन प्रणालीलाई बोझिलो बनाउँछ । राती आठ बजेभन्दा पछि संभव भएसम्म खाना खानु हुँदैन । राती हल्का भोजन गरौं ।
– खाना पकाउनका लागि असंतृप्त भेजिटेबल तेल जस्तो कि, सोयाबिन, सन फ्लावर आदिको तेल प्रयोग गरौ । खानामा चिनी र नुनको मात्रा नियन्त्रण गरौं ।
– ताजा सब्जी र फल सेवन गरौ । खानेकुरा सही ढंगले भण्डारण गरौं ।
– खानामा सलाद, दुध, दही, दाल, हरियो सागपात, अन्न आदिको सन्तुलन मिलाउनुपर्छ । खाना पकाउने पानी शुद्ध हुनुपर्छ ।
– अत्याधिक तेल वा मसलाले बनेको खानेकुरा सेवन गर्नु हुँदैन । खाना सही आँचमा पकाउनुपर्छ । धेरै लामो समय सागसब्जी पकाउँदा त्यसको पोषक तत्व नष्ट हुन्छ ।
Previous Postअनौठो गाउँ, जहाँका मानिसले सर्पको विष पचाउँछन्, सर्पसँगै खेल्छन् पुरा विवरण हेर्नुहोस Next Postएक महिलाले पागल झै बालुवा खोतलिरहिन्, नजिकै गएर हेर्दा सबैको आँखा रसायो यस्तो रहेछ कारण पुरा विवरण हेर्नुहोस